Curtis မီးဖိုချောင်တွင် Broadcast Beat Team သို့ထည့်သွင်းခြင်းအကြောင်းကြေငြာခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » အဆိုပါအသံလွှင့် Beat အဖွဲ့သို့ Curtis မီးဖိုချောင်၏ထို့အပြင်ကြေညာ
အဆိုပါအသံလွှင့် Beat အဖွဲ့သို့ Curtis မီးဖိုချောင်၏ထို့အပြင်ကြေညာ
, သင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ယူလာရန်ကျူးလွန် - www.broadcastbeat.com - မကြာသေးမီကသေးအသံလွှင့်ရန်နောက်ထပ်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအထူးကုမဂ္ဂဇင်းအဖွဲ့ Beat ကဆက်ပြောသည်သိရသည်။
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) ဧပြီ 6, 2014 - "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" အချို့အလွန်အတွေ့အကြုံရှိအခွက်တဆယ်ကိုဆွဲဆောင်နေဖြင့်ယင်း၏အထက်သို့တောင်တက်ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ www.broadcastbeat.com.
Curtis မီးဖိုချောင်မှာယခင်ကတစ်အယ်ဒီတာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာမဂ္ဂဇင်း E-သတင်းလွှာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာတာဝန်များနှင့်အတူလက်ရှိတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနဲ့ကုန်သွယ်ရေးရှိုးများ၏ဒါရိုက်တာနှင့်အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ပါသည် လေလံမဂ္ဂဇင်းတစ် 64-စာမျက်နှာအမျိုးသားလေလံအသင်းမှထုတ်ဝေနှစ်စဉ် 10-ကြိမ်ပုံနှိပ်နှင့်ယခုထုတ်လွှင့်ဘိ၏နောက်ဆုံးပေါ်န်ထမ်းများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဘို့ BEသူက Facebook နှင့် Twitter မှတဆင့်မဂ္ဂဇင်းရဲ့လူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်ဦးဆောငျရနျ။ အဘို့ လေလံသူကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖန်တီးများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးကနေမေးလ်မှဂရပ်ဖစ်မှအခြားထုတ်ဝေ-related တာဝန်များကိုတစ်များပြားလှသောလုပ်ဆောင်တယ်။ တည်းဖြတ်ရေးအပြင်, သူလည်းများသောအားဖြင့်မိမိအမီဒီယာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်တာ "€âပြဿနာနှုန်းအနည်းဆုံးတဦးတည်းပုံပြင်မင်တံ။
Curtis လည်းများအတွက်ဦးတည်ချက်နှင့်ထောက်ခံမှုပေးသည် လေလံရဲ့ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာနှင့်စျေးကွက်နှင့်အရောင်းညှိနှိုင်းရေးမှူး။ ပုံနှိပ်စာပမြေားထံမှလူမှုမီဒီယာမှ - သူကွဲပြားခြားနားသောဆိုင်များတွင် '' လိုအပ်ချက် fit မှတစ်ဦးချင်း (ထူးခြားသော) မက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သူ၏မီဒီယာနောက်ခံအသုံးချ။
မိမိအအားလပ်ချိန်မှာအချိန်မှာတော့ Curtis များအတွက် freelances အဆိုပါကြောင်အပေါ်ကိုယူခဲ့ (www.bringonthecats.com), အရာ Kansas ပြည်နယ်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အားကစားနှင့် ပတ်သက်. In-depth ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထင်မြင်ချက်များတစ်စည်းစိမ်ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်အားကစားဘလော့ဂ်များ၏ SB Nation ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ကောလိပ်ဘောလုံးထိပ်တန်း 25 AP သတင်းဌာနနှင့် USA Today နည်းပြ '' ရွေးကောက်ပွဲနှင့်လွှတ်ပေးနေတဲ့အပတ်စဉ်ထုတ်နဲ့ Big 12 ညီလာခံပါဝါအဆင့်စာရင်း၏အပတ်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြန့်ဖြူး။
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းအတွက်ထုတ်လွှင့် Beat အဖွဲ့သို့ Curtis '' အရေးအသားနှင့်မီဒီယာထိုးထွင်းသိမြင်မှုရောက်စေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ဂုဏ်ယူနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ် Beat ။
ဆက်သွယ်ရန်: ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း
ဖုန်းနံပါတ်: (855) 44-BBEAT
ဖက်စ်: (954) 233-1978
အီးမေးလ်က: [အီးမေးလျ protected] / www.broadcastbeat.com
လေလံမဂ္ဂဇင်း အဆိုပါကြောင်အပေါ်ကိုယူခဲ့ အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Beat အာဘော် ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အကြောင်းအရာ Curtis မီးဖိုချောင် 2014-04-06
ယခင်: အသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းများအတွက် #NABShow ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်းကြေညာ
နောက်တစ်ခု: CINEDECK သည် NAB တွင်မီးသတ်ပါဝါနှင့်ထုတ်လွှင့်မှု 4k စံများ (Booth # SL14317) ကိုအာရုံစိုက်သည်
ထုတ်လွှင့် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏မဂ္ဂဇင်း Named ထုတ်လုပ်သူ Beat
IBC ပြရန် #IBC2015 @IBCShow လာထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ
စက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့် Curtis Chan ကို Broadcast Beat မဂ္ဂဇင်းအတွက်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်
အဆိုပါ #NABShow လူမှုမီဒီယာ Dashboard ကို @BroadcastBeat ကြေညာ